विप्लव माओवादी पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले किन दिँदैन पत्र ? - Nepal Bahas Nepal Bahas
विप्लव माओवादी पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले किन दिँदैन पत्र ?
प्रकाशित मिति : २१ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ०८:२७
काठमाडौं । लामो द्वन्दपछि शान्तिको महशुस गरिरहेका नागरिक ललितपुरको बम विस्फोटपछि आतंकित बनेका छन् । देशमा दुई तिहाहीको बहुमत भएको सरकार छ । तर, त्यही सरकाको सुरक्षा व्यवस्था फितलो भएको महशुस नागरिकले गरेका छन् । उता, मुलुकका विभिन्न भागमा बम पड्काएर सर्वसाधारणलाई आतंकित पारेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई पक्राउ गर्ने स्पष्ट आदेश नहुँदा सुरक्षा अधिकारीहरु गृह मन्त्रालयलाई सूचना बुझाउँदै फर्कंदै गरेका छन्। ललितपुरको बम विस्फोटपछि आलोचित सुरक्षा संयन्त्रले आफ्ना जासुस परिचालन गरी विप्लवलगायत सो दलका अन्य नेता रहेका स्थानबारे सूचना संकलन गरेको छ। सुरक्षा निकाय संकलित सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा बुझाएर पक्राउ आदेशको पर्खाइमा छ। ‘माथिल्ला तहका नेताहरु कहाँकहाँ छन् भनेर हामीले दैनिक सूचना बुझाएका छौं, पक्राउ गर्न आदेश आयो भने हामी तयारीमा छौं’, उच्च सुरक्षा स्रोतले भन्यो।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तम सुवेदीले विप्लवका गतिविधिबारे प्रहरी जानकार रहेको बताए। उनले संविधान प्रदत्त अधिकारअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोध नभएको बताए। ‘आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकाको खोजी भइरहेको छ। को कहाँ कसरी संलग्न भएका हुन्, प्रहरीले पहिचान गरेकाले उनीहरुको खोजीमा लागेका छौं’, सुवेदीले भने। उनले कानुनविपरीत गतिविधि गर्नेलाई कानुनले नछाड्ने बताए। ‘विप्लव वा अन्य नेता भनेर हामीले कसैलाई टार्गेट गरेका छैनौं। ललितपुर बम विस्फोट र अन्य घटनामा संलग्न रहेकाहरु मध्ये केहीलाई पक्राउ गरिएको छ। उनीहरुको बयान हेर्दैछौं। त्यसैअनुसार कसलाई कुन मुद्दा लगाउने भन्ने निर्धारण हुन्छ’, सुवेदीले भने। उनका अनुसार प्रहरीले विप्लवलाई पुरानो घटनाका सन्दर्भमा पनि खोजी गरिरहेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
#ललितपुरको बम विस्फोट